Faa'idooyinka Shaqo la'aanta ee Jawaab celinta fayraska corona COVID-19 | VTLawHelp.org
Faa'idooyinka Shaqo la'aanta ee Jawaab celinta fayraska corona COVID-19
FIIRO GAAR AH: Warbixintaan waxay aheyd mid sax ah ka bilow Abriil 17, 2020, si kastaba warbixinta qaar way isbadeli kartaa tan iyo markaas kadib. Fadlan fiiri vtlawhelp.org oo wixii aqbaaro hadeer ah.
Haddii aad lumisay shaqadaada ama saacadahaaga la jaray sabab la xiriirto fayraska corona COVID-19, waxaad malaha heli kartaa caawinta qaar. Waxaad codsan kartaa faa'idooyin xittaa haddii badroonigaaga uusan dhihin inuusan. Badrooniyada ma sameeyaan go'aamada ku saabsan faa'idooyinka shaqo la'aanta — gobolka wuxuu sameeyaa.
Miyaan u qalmaa faa'idooyinka shaqo la'aanta inta lagu jiro masiibooyinka COVID-19?
lagu kireystay laakin aadan bilaabi kareyn sabab la xiriirto COVID-19
aad ka tagtay shaqada si aad u daryeeshid canug oo dugsigiisa ama xarunta daryeelka carruurta xireen sabab la xiriirto COVID-19
aad ka tagtay shaqada si aad u daryeeshid xubin qoyska ah oo laga helay COVID-19
aad isku karantiishay sida waafaqsan amarada dhaqtarka
lagaa helay COVID-19 ama aad qabtid aastaamo oo aad u baahantahay baaritaan
aadan shaqeyn karin sabab la xiriirto amarada guriga joog
weydiisay badroonigaaga inaad guriga ka shaqeysid sababo caafimaad dartiis oo badroonigaaga wuxuu yiri "maya"
ka tagtay shaqada sababtoo ah badroonigaaga ma raaceyn jaheynada badbaadada oo wuxuu kugu soo rogayay halis aan macquul aheyn oo inuu kugu dhaco COVID-19
Haddii aadan shaqeyn karin sababtoo ah aad ku jirtid karantiil, jirantahay, daryeeleysid xubnaha qoyska oo jiran, ama daryeelida canuga, waa inaad fiirisaa haddii aad u qalantid waqtiga jirada la helay ee Vermont iyo fasaxa la bixiyay ee COVID-19 ka faderaalka. Samey midaan ka hor inta aadan codsan shaqo la'aanta. Fiiri bogga ku saabsan sharciga fasaxa faderaaalka la bixiyay.
Miyaan u qalmaa xittaa haddii aanan aheyn “shaqaalaha madaxabanaan” ama qandaraasle madaxbanaan?
Haa! Haddii aad iskaa u shaqeysatid, qandaraaslaha madaxabanaan ama qof iskii u shaqeysto wuu u qalmi karaa haddii aad buuxisid sharuuda kale ee kor ku qoran.
Vermont waxay weli dajineysaa sharciyo iyo nidaamyo codsi oo faa'idadaan ah. Booqo websaydka Waaxda Shaqada si aad u ogeysiisid sida laguula soo xiriiro markuu codsigaan diyaar noqdo.
Fiiro gaar: Miyuu ganacsigaaga yar codsaday "Illaalada Jeega lacag bixinta" amaahda SBA ama amaahda masiibada dhaawaca dhaqaalaha? Miyay maalgelintaan kuu ogolaatay inaad joogteysid saacado joogto ah? Haddii haa tahay, kadib malaha ma heli kartid shaqo la'aanta quseyso barnaamijyo walboo cusub.
Ka waran haddii aanan buuxin sharuudaha taariiqda shaqada ugu yar sannadkaan?
Haa! Xittaa haddii aadan laheyn taariiqda shaqo kugu fillan waxaa kuu suurtogeli karto faa'idooyinka shaqo la'aanta inta lagu jiro waqtigaan.
Haddii aad hadeer u qalantid shaqo la'aanta sababtoo ah COVID-19 (tusaale ahaan, sababtoo ah ma heysid taariiqda shaqada oo badan ama waxaa tahay qandaraasle madaxbanaan), Vermont wuxuu weli qorayaa sharciyada oo sida faa'idadaada loo xisaabinayo. Tirada waxay ku kala duwanaaneysaa sida u dhaxeyso $191/isbuucii (bar oo heerka isku celceliska faa'idada shaqo la'aanta ee rubacii sadexdii bilood ee la soo dhaafay) iyo $513/isbuucii.
Haddii aad xareysid sheegashada isbuuclaha waxaad sidoo kale heleysaa dheeraad $600 oo “magdhowga shaqo la'aanta cudurka faafa” isbuuc walba. Lacagtaan waxaa la helayaa illaa Luuliyo 31, 2020. Waad heli kartaa xittaa haddii aad kaliya heleysid qeyb shaqo la'aanta ah.
Illaa intee ayaan ku heli karaa faa'idooyinka caymiska shaqo la'aanta inta lagu jiro masiibooyinka?
Haddii aad u qalantid, waxaad heli kartaa faa'idooyinka shaqo la'aanta oo illaa 39 isbuuc ama illaa Diseembar 31, 2020 -- mid walboo soo hormaro.
Ka waran haddii aan horaan u isticmaalay illaa 26 keyga isbuuc ee shaqo la'aanta ah sannadkaan?
Haddii aad soo xareysid sheegasho kale oo aad u qalantid, waxaad heli kartaa 13 isbuuc ee kale oo faa'idooyinka shaqo la'aanta la kordhiyay. Hubi inaad dib u xareysid codsashada midaan.
Gudaha Vermont, sheegashooyin hore oo magdhowga shaqo la'aanta waa in lagu sameeyaa taleefon ahaan ama onleenka. Soo wac 1-877-214-3330 ama 1-888-807-7072. Waaxda Shaqada Vermont waxay leeyihiin foom onleen ah. Ku dhameystir foomkaan halkaan.
Haddii aad tahay qandaraasle madaxbanaan, iskiis u shaqeyste ama shaqaalaha “madaxbanaan”, waxay noqon kartaa dhoor isbuuc ka hor inta aysan kuu suurtogelin inaad aasaastid sheegashadaada. Vermont waxay weli dajineysaa sharciyo iyo nidaamyo codsi oo faa'idadaan ah. Booqo websaydka Waaxda Shaqada si aad u ogeysiisid sida laguula soo xiriiro markuu codsigaan diyaar noqdo.
Illee intee ayaa ah inaan sugo?
Waqtigaan, Waaxda Shaqada malahan muddada sugitaanka oo faa'idooyinka shaqo la'aanta.
Waqtiyada caadiga ah, waxay caadi ahaan qaadataa qiyaastii labo isbuuc oo lagu helayo lacag bixintaada ugu horeyso. Sababtoo ah cudurka faafa, waa inaad sugtaa muddo dheer. Suurtogal ma ahan in la ogaado sida dhabtaa h markii aad heleysid lacag bixinta ugu horeyso.
Joogtey xareynta sheegashadaada isbuuc walba oo inaysan kuu suurtogaleyn inaad shaqeysid ama saacadahaaga la jaray. Haddii magacaaga ugu dambeeyo ku bilwodo A-E, ku soo dir sheegashadaada isbuuclaha Isniinaha, F-L oo Tallaadooyinka, M-R oo Arbacooyinka iyo S-Z oo Jimcooyinka.
Illaa Waaxda Shaqada ay dhahdo haddii kale, uma baahnid inaad cadeysid inaad raadineysid shaqo. Waaxda Shaqada ma rabaan in dadka halis geliyaan caafimaadkooda ama kuwa dadka kale inta lagu jiro cudurka faafa ee fayraska corona. Lagaama rabo inaad tustid inaad heshay wareysiyada shaqada, ka qeybgalay tartamada shaqada, iyo sidaas.
Medicaid sidoo kale way ku jirtaa lacagtaan shaqo la'aanta, marka laga reebo $600/isbuucii oo “magdhowga shaqo la'aanta cudurka faafa.” Waa inaan ku soo wargelinaa lacagtaada shaqo la'aanta Vermont Medicaid. Waxaan u maleynaa in dadka inta badan ay u suurtogasho inay helaan faa'idooyinka shaqo la'aanta dheeraadka ah oo haystaan Medicaid. Haddii aad heshid warqad dhaheyso in Medicaid ay isbadeleyso ama dhammaaneyso, fadlan nagala soo xiriir Xafiiska U doodaha Daryeelka Caafimaadka (HCA). Soo wac 1-800-917-7787 si aad ula hadashid u doodaha daryeelka caafimaad, ama buuxi Foomka Codsiga Caawinta. HCA waa adeeg bilaash u ah reer Vermonters.
axaad haysataa 30 maalmood ka bilow taariiqda ku jirto ogeysiinta qoran ee racfaanka. Laakin diidmooyinka qaar waxaa lagu xalin karaa racfaan la'aan. Waaxda Shaqada waxay la macaamileysaa codsiyo badan hadeer, iyo qiyaastoo bar iyaga ah waxay helayaan diidmooyinka koowaad sababtoo ah nidaamka ma hayaan warbixin ku fillan. Ka hor racfaan qaadashada, waxaad isku dayi kartaa la xiriirida Waaxda Shaqada oo maalinta laguu xilsaaray adiga si aad u aragtid haddii aad tahay mid ka mid ah dadka inta badan helayo in sheegashadooda la xaliyo. Haddii magacaaga ugu dambeeyo ku bilwodo A-E, sii wac Isniinaha, F-L oo Tallaadooyinka, M-R oo Arbacooyinka iyo S-Z oo Jimcooyinka.
More in Somali / Maay Maay: Audio about COVID-19 financial help from CVOEO